Weather | Climb O'Clock
ခါကာဘို ရဲ့ သဘာဝခေါ်သံကို နားဆင်ဖို့
Posted on July 24, 2014	by climberdoelone
ခါကာဘိုအကြောင်းအသေးစိတ်ရေးဖို့ဒီတစ်ခါ ဘယ်လိုမှအချိန်မရလို့…. တောင်တစ်ဝိုက် weather report ကို မနေ့ညကကြည့်ဖြစ်တယ် စိတ် လှုပ်ရှားတယ်…….စိတ်ထဲစိုးရိမ်မိတာလေးတွေတော့ ရေးပါရစေခင်ဗျာ (အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ ခပ်ရှည်ရှည်ရေးခဲ့ပါတယ် ဆိုတဲ့ ခုသွားဖို့စိုင်းပြင်းနေတဲ့ တောင်တက်ခရီးအကြောင်း “ခါကာဘို ရဲ့ သဘာဝခေါ်သံ” ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးခဲ့ပါတယ် https://climberdoelone.wordpress.com/2014/06/06/%E1%80%81%E1%80%AB%E1%80%80%E1%80%AC%E1%80%98%E1%80%AD%E1%80%AF-%E1%80%9B%E1%80%B2%E1%80%B7-%E1%80%9E%E1%80%98%E1%80%AC%E1%80%9D%E1%80%B1%E1%80%81%E1%81%9A%E1%80%9E%E1%80%B6/ ) .weather report ကြည့်ရင်း တောင်ပေါ်မှာ ရေခဲမှတ်အောက်-6’C ပြနေတယ် ဒါကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ ၊ ဒါပေမဲ့ တိမ်တွေများတယ်ဆိုတော့ တောင်ပေါ်အမြင့်ပိုင်းရောက်လေလေ မနက်ဘယ်အချိန်မှာ နေပွင့်မယ် ဘယ်တော့မှောင်သွားမယ် ၊ ရာသီဥတု ရုတ်တရက်အပြောင်းအလဲဘာမှမပြောနိုင်ဘူး …..တောင်တက်တဲ့အခါ. နေဝင်နေထွက်ချိန်တွေသိထားတာလည်း … Continue reading →
Posted in Climbing, Fact, Hkakaborazi, Mountaineering, Trip Forecast, Weather	| Tagged Hkakaborazi, ION_Invitation of Nature	| Leaveacomment
ဂမ်လန်ရာဇီ အနီးတဝိုက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်
Posted on September 5, 2013	by climberdoelone
ဂမ်လန်ရာဇီ အနီးတဝိုက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက် September 5, 2013 at 4:31pm ကျန်းမာတော်မူကြပါစခင်ဗျာ……… ယနေ့ ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ရဲ့ အနီးတဝိုက် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်ကို ဘာသာပြန်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်. 😀 ဂမ်လန်ရာဇီ အခြေခံစခန်းးအမြင့်ပေ တစ်သောင်းနှစ်ထောင် (၁၂၀၀၀) -၆၅၀/ဟက်တိုပါစကယ်/မီလီဘား ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ပေါ် စခန်း၁ :အမြင့်ပေ တစ်သောင်းခြောက်ထောင့်ငါးရာ (၁၆၅၀၀ ) – – ၅၅၀မီလီဘား ဂမ်လန်ရာဇီ တောင်ပေါ် စခန်း၂ :အမြင့်ပေ တစ်သောင်းရှစ်ထောင် … Continue reading →
Posted in Gamlangrazi, Trip Forecast, Weather	| Tagged Gamlang Razi, Myanmar Climbing, Weather Forecast	| Leaveacomment